iPod ၁၄ နှစ် | ငါက Mac ကပါ
Jordi Gimenez | | Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
ပထမဆုံး iPod ၏ဒဏ္myာရီနှင့်ဒဏ္icalာရီဆန်သောပထမဆုံးမော်ဒယ်လ်ကိုအက်ပဲလ်ဈေးကွက်မှနုတ်ထွက်ပြီးနောက်မကြာမီကပင်အက်ပဲလ်၏အဓိကကျသောအချိန်ကာလအတွင်းရောင်းချခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။92014 စက်တင်ဘာလ iPod Classic လို့ခေါ်တဲ့ iPod တွေပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်အက်ပဲလ်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအက်ပဲလ်ရဲ့ထုတ်ကုန်စာရင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်တော့မှာပါ ငါတို့သည်သင်တို့ကို 14 နှစ်အပေါ်ချီးကျူးသွားကြသည် ဒီဂီတဖွင့်စက်အမျိုးအစားကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာ။
အက်ပဲလ်ဟာဒီဂျစ်တယ်တေးဂီတဖွင့်စက်တွေဟာကြီးမားပြီးနှေးကွေးတယ်၊ သေးငယ်တယ်၊ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ Steve Jobs ရဲ့အမြင်မှာဒီစက်ပစ္စည်းတွေဟာသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်တွေအရမ်းဆိုးပြီး Apple ကအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် ၂၀၀၁ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဂျော့ဘ်စ်က Apple iPod အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ ပထမဆုံး iPod များကဂီတလုပ်ငန်းနှင့်၎င်းတွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းကိုအဓိကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေခဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်၏ 5GB $ 399 ကုန်ကျသည်.
ဒီပထမဆုံး iPod FireWire ဆိပ်ကမ်းရှိခဲ့တယ် နှင့်တောက်ပသောငွေနှင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၄ င်းသည် ၄.၂၀ လက်မ x ၂.၄၂″ x ၀.၇၈ measured တိုင်းထွာခဲ့ပြီးဂရမ် ၂၀၀ အောက်သာအလေးချိန်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌စျေးကွက်ရှိ iPod များနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်အစမှာသတိပြုသင့်ပါတယ် Mac နဲ့သာသဟဇာတဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်၏တင်ဆက်မှုဗီဒီယိုကိုဖြုန်းတီးခြင်းမရှိသောကြောင့် Apple ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုပြသည်။
ကျန်ရှိနေသည့်အရာအားလုံးသည် iPod ၏သမိုင်းကြောင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည် ဂီတဖွင့်စက်နှင့်ကိရိယာများအပြောင်းအလဲများရှိသော်ငြားလည်းသင့်အားအသက်ရှည်စေလိုသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သူတို့သည်စွမ်းအားမြင့်စမတ်ဖုန်းများ ၀ င်ရောက်မှုနည်းပါးသောကိရိယာများဖြစ်သော်လည်း iPod တွင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းသေးငယ်သောအသေးအဖွဲအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော iPod Touch ၏ကိုယ်ပိုင်မြင်ကွင်းနှင့်အတူထူးခြားသည့်တိုးတက်မှုများဖြင့် ဆက်လက်၍ ခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။ Nano နှင့် Shuffle စသည်တို့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » ဂုဏ်ယူပါတယ် iPod! စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက ၁၄ နှစ်
Pegatron, Apple ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ, သည်၎င်း၏ရှန်ဟိုင်းစက်ရုံတွင်အလုပ်သမားအလွဲသုံးစားမှုစွပ်စွဲချက်များ